विवाहको १५ दिनमै ज्यान गुमाएकी राधीकाबारे यस्तो खुलासा
- नेपाली सन्देश आइतवार, चैत्र ११, २०७४ , 5.3K जनाले हेर्नुभयो
गुल्मी–विवाहको १४औँ दिनसम्म नयाँ दाम्पत्य जीवन विताएका उनीहरु । १५औँ दिनको विहानपख विस्तारामा श्रीमानसँगै मुस्कुराउँदै उठेकी उनी केहीवेरपछि घरबाट निस्कन्छिन् । त्यहीँ विहानीको मुस्कान नै उनका श्रीमानका लागि अन्तिम मुस्कान बन्न पुग्छ ।
उनी अर्थात राधीका न्यौपाने । फागुन १६ गते । पाल्पाको पुर्वखोला गाउँपालिका–२ जलपाका ३० बर्षीया झविलाल पाण्डेयसँग राधीकाको मागी विवाह भयो । वुटवलको गोलपार्क राधीकाको माईती घर । धुमधामसँग मागी विवाह भयो ।
तर, केही दिन अगाडि राधीका होटलको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परिन् । वुटवलको दुर्गामन्दिर लाईनमा रहेको वुर्तिवाङ्ग होटलको कोठामा मृत फेला १९ वर्षीय राधीकाको मृत्य रहस्यमय बन्दैछ ।
घटनाले त्यतिबेला फरक मोड लिन्छ, जव होटलमा दर्ता गरिएको नाम फरक पर्छ । राधीकाले होटलमा आफ्नो वास्तविक नाम लेखाइनन् । श्रेया नेपालको नाममा होटलमा बसिन् । ठेगना पनि ढाँटेर तानसेन नगरपालिका–३ लेखाइन् ।
विवाह भएको दिन देखि सम्वन्ध एकदमै सुमधुर रहेको र दुवैजना फागुन २९ गते गोलपार्कस्थित ससुराली गएको पत्नी वियोगको पीडामा रहेका पाण्डेले बताए ।
उनले भने ‘उनी र म विहान हाँशी खुशी उठ्यौँ, मेरो दिदी वुटवलमै रहेकोले म उहाँलाई भेट्न जान्छु भनेर निस्किएँ । म हिडेको केही वेरपछि उनले बैंक जान्छु भनेर बहिर निस्केकी रहेछिन् ।
पाण्डेयले थपे, ‘म दिदीकोबाट साँझ ससुराली मै आएँ । राधीका कहाँ छिन् भनेर सोध्धा त्यस्तो खवर पाएँ । अर्को दिन देखि फोन गर्दा कति वेला स्वीचअफ गर्ने त कति वेला केटा मान्छेले उठाउने गर्न थाल्यो । चौथो दिन चैत्र ३ गते साँझ एक्कासी वुर्तिवाङ्ग होटलको कोठामा मृत फेला परेको खवरले छाँगाबाट खसे जस्तो भइयो ।’
किन पुगिन धरान ?
बुटवलस्थित एक बैंकमा जान्छु भनेर हिडेकी न्यौपानेको झोलामा चैत्र २ गते विहान साढे पाँच वजे धरान जाने बसको टिकट भेटियो ।
बुटवलकी मान्छे राधीकाले भर्खरै विवाह गरेका श्रीमानलाई जानकारी नदिई किन धरानको टिकट काटिन् ? अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
के उनी धरान पुगेर फर्किइन् ?
कतिपयले राधीका धरानको वसपार्कमा वेहोस भएर ढलेको र पछि टिकट काटेर बुटवल पठाएको पनि दावी गरेका छन् ।
बुुटवल ईलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा न्यौपानेले प्रयोग गर्दै आएको फोन अहिले पनि एक पुरुषले उठाउने गरेका छन् । सुरुमा ती पुरुषले नेपालगञ्ज छु भनेका थिए । पछि फोन गर्दा लमही छु भनेका थिए ।
यहाँबाट फेरि अर्को नयाँ घटना देखियो ।
धरान पुगेकी न्यौपानेको फोन कसरी पश्चिमतर्फ रहेका व्यक्तिले उठाए ।
के ती पुरुषले झुठ बोलिरहेका छन् ? प्रहरी अनुसन्धानमै छ ।
बुटवल ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रवत्ता प्रहरी निरीक्षक भिमलाल भट्टराईले घटनावारे अनुसन्धान भैरहेको बताए ।
खुसुक्क किन मेडिकल गईन ?
विवाह भएको ६ दिन पछि राधीका आफु र घर परिवार कसैलाई नसोधी घर देखि धेरै तल रहेको एक मेडिकल पसल गएकी थिइन् ।
उनी किन मेडिकल पसल गएकी होलिन ? श्रीमान पाण्डेय स्मरण गरिरहेका छन् ।
‘त्यस दिन विहान मैले उनलाई केही कुरा सम्झाएँ । हामीले घर पनि बनाउन लागेका छौँ, घर बनाउँदा र विवाहको सालभरी सत्रु लाग्छन् भन्छन् । सजग हुनु । घर देखि कतै नजानु । घर बनाउने मान्छेसँग पनि नवोल्नु । आज तिमी खान पकाउनु, म स्कुल हिडेँ ।’ पाण्डेयले त्यसदिनको कुरा सम्झिए, ‘म हिडेको केहीवेर पछि उनी घरका कसैलाई नसोधी हिडिछन् । छिमेकी दाजुले मलाई फोन गरेर भन्नु भयो, राधीका तिमीलाई सोधेर हिडेकी हुन् र घर छैनन् नि ? म दङ्ग परेँ । उनलाई फोन गरेर सोधेँ । उनले पेट दुखेर जचाउँन आएको भनिन् । म तुरन्तै उनलाई लिन गएँ । त्यहाँबाट तानसेनको एक मेडिकलमा ल्याएर जचाएँ । औषधी लिएर घर आयौँ । तर, अहिले थाह भयो उनले त्यो औषधी नै खाएको देखिन्न । म सोच्मग्न छ । केही आशंका जन्मियो ।’
पाल्पाकै निस्तेखोला गाउँपालिकाको श्रृष्टि प्राधामिक विद्यालयमा शिक्षक रहेका उनका श्रीमान पाण्डेय भन्छन्, ‘के गर्ने छोरो मान्छे रुँदै हिड्न पनि नहँुने, सम्झिँदा भक्कानिन्छ मुटु । परिवार र छिमेकका मानिससमेत शोकाकुल छन् । अनेकन कुरा काट्ने जस्ता कुराहरुले थप पिडा थपेको छ । उनलाई जे तनाव थियो त्यो कुरा भनेको भए पनि हुन्थ्यो । जे भएपनि उनले ज्यान हाल्न हुँदैन्थ्यो ।’